Maruva kuendesa kune epamutemo masangano nekumabhangi kuchinjisa muMoscow | Kubhadhara kubva kuakaundi account yesangano
Kutumirwa kwemaruva kwemasangano epamutemo nekutamisa kwebhangi kuMoscow.
Unoda kuodha maruva sesangano repamutemo. munhu ane mubhadharo kubva kubhengi account kuMoscow?
Kuraira nekutamisa bhangi kuri nyore!
Unoda here kuodha maruva izvozvi? - ingosarudza bouquet ye Floristum.ru muMoscow, uye pane peji reodha, sarudza nzira yekubhadhara "Isiri-mari yezvinhu zviri pamutemo", zadza ruzivo uye chibvumirano chinotumirwa pakarepo kune tsamba yako uye invoice ichapihwa.
Iwe unosarudza here kupedzisa chibvumirano pachine nguva uye nekuraira maruva pamberi pekubhadhara? - ndapota nyorera kwatiri nezvezvinangwa zvako: corporate.floristum.ru/en kana kufona: 8 800 600-54-97.
Iyo assortment yemabouquets pamitengo yakaratidzwa panzvimbo ino inopihwa severuzhinji kutengeserana kupihwa maruva kumasangano epamutemo.
Zvakanakira kushanda pamwe Floristum.ru muMoscow kumasangano epamutemo
(yekutengesa kupihwa maruva nekutakura):
Maruva ane dhirivhari zuva nezuva muMoscow uye chero guta reRussia pasi pechibvumirano chimwe chete.
Wapedza chibvumirano chimwe chete, unogona kuraira maruva nezvipo kune chero guta muRussia panoshanda Floristum.ru, uye aya ndiwo mazana enzvimbo dzinogara vatengi vako nevamwe vako!
Kubhadhara kwemaruva kubva kubhengi account yesangano.
Zvakareruka otomatiki sisitimu yekubhadhara kubva ku LLC "FLN" (Floristum.ru) kune ruzivo rweyako yepamutemo sangano, kuburikidza neodhita yemuchato. Iwe haufanire kunyora chero kupi, kufona uye kuregerera bhiri, iyo system ichaburitsa invoice kune iyo email kero iwe yawatsanangura.
Zviuru zvemabouquets zviripo Zimmobi.ru muMoscow!
Raira kuendesa kubva kune chero guta kune chero guta muRussia! Zvese zvaunoda ndeyekutsanangudza guta, sarudza rakakodzera bouquet yemaruva uye tsanangura iwo ma parameter ekuendesa.
Yakaderera mutengo wemabouquets.
Floristum.ru inyanzvi iyo zvitoro zvemaruva uye makambani ekutengesa akawanda anopa avo ehunyanzvi maruva uye nziyo. Paunotenga pano, unogona kuve nechokwadi kuti uchagamuchira bouquet yakakura kubva kune nyanzvi pamutengo unokwezva.
Chibvumirano chimwe chete chekuraira kubva kuzviuru zvezvitoro zvemaruva.
Nekupedzisa chibvumirano chimwe chete, iwe unowana mukana wekutenga maruva kubva kuzvuru zvishanu zvitoro. Iyo portal ine yakasarudzika yakakura sarudzo yemabouquets kwese kuravira. Fungidzira - anopfuura zviuru zana. Uye iwe unogona kuzvitenga muzvikamu zviviri. Iwe unongoda kuisa yako ruzivo mune iri nyore fomu kamwe chete, mune ramangwana ivo vanozowedzerwa kune fomu reodha otomatiki.
Kudzivirirwa kubva kune vanobiridzira uye mashoma emabasa
Paunenge uchihodha uye uchibhadhara masevhisi kuburikidza neInternet, hazvina kuoma kuwira kune hunyengeri hwevanyengeri uye kutambisa mari yako, kana kungo tenga isina kunaka sevhisi sevhisi. Iyo Floristum.ru portal ine yevatengi yekudzivirira system. Kusvikira yako odha yapera, mutengesi haazogashira mari yazvo. Izvi zvinovimbisa kunaka kwebasa rakaitwa, kuchengetedzeka kwenzvimbo uye 100% vimbiso yekudzoserwa mutengi.
Zvinyorwa zvisina basa zvekuvhara.
Imwe mukana ndeyekuti magwaro anovhara chibvumirano anotumirwa kune accountant yako otomatiki pasina zviyeuchidzo. Kanganwa nezve kuunganidza maresiti, zviyero, marekodhi ekutenga. Iye zvino, iwe unongogamuchira izvo zvekutanga kukero yako yekutumira uye zviyero neemail. Zviri nyore uye zviri nyore kwazvo!
Hatina zvimwe zvekubhadhara patinobhadhara kubva kuaccount yazvino.
Mitengo yemaruva yakafanana neyevanhu vamwe nevamwe. vanhu:
Bouquet of 19 red roses, 15 ruscus, chipo chakaputirwa.
3060 ₽ Maruva matsvuku maruva (19 maruva)
Bouquet yakatsvuka renji gumi neshanu magedhi ane magidhi, pfuti uye kurongedza: hunyanzvi uye kunyarara.
3050 ₽ Maruva emaruva "Red Gerberki"
bouquet ye15 pfapfaidzo chrysanthemums
4900 ₽ bouquet ye15 pfapfaidzo chrysanthemums
Maruva akanaka e51 chrysanthemums
11790 ₽ Bouquet nhamba 222
Delicate bouquet ye chena alstroemeria mune hunyanzvi.
5776 ₽ Bouquet nhamba 234
Bhokisi - 1 pc.
Stylish bouquet yeyakajeka yero roses mune ngowani bhokisi. Iyi yakanaka bouquet ichave iri yakanaka chipo kune chero chiitiko kana chiitiko. Iyo bhaweti ichapa zvirokwazvo inonakidza kwazvo zvimiro kune vako vaunoda.
5896 ₽ Bouquet nhamba 245
Bush akasimuka - 15 pc.
Mumwe-musoro akamuka - 9 bv.
Charming pfapfaidza maruva akasanganiswa nekupenya kweye yakatsvuka klassiske rose.
5090 ₽ Bouquet nhamba 211
Iris - 25 bv.
isu tinovimbisa kutsva kwemaruva. kuburitswa kubva kumaawa maviri ... bhuruku rebhuruu irises sechipo chiratidzo chinodziya, chisina kusimba uye chakanatswa cherudo nekuyemura, izvo zvinokonzeresa chete manzwiro uye hazvizotaridzika zvekunyepedzera. irises, kuchenesa hunhu, hukuru uye kutsva kwechinyakare, hazvisi zvisina maturo zvinodiwa nevanhu vazhinji vakanaka!
6576 ₽ Maruva e irises
kusvika paawa imwe
Ratidza ese echinyakare mono bouquets
sunflowers 7, buplerum 2, pinkum fountain 4, diki chamomile 3, nigella bhuruu 5, ammonium 2, limonium yero 3, salal 2/3, eucalyptus 1/2, bhokisi-chikamu, kuvhura hamvuropu.
8710 ₽ Kuumbwa kwezuva "Solar package"
Mwoyo bhokisi 1 pc, gwenzi rakakwira 7 pcs, chokoreti mavara 5 pcs
3350 ₽ Bhokisi rine maruva "Rudo Mwoyo"
Peony 1 pcs Eustoma 2 pcs Imwe-misoro yakasimuka 3 pcs Spray rose 3 pcs Alstroemeria 3 pcs Imwe-ine musoro carnation 1 pcs Eucalyptus
3900 ₽ Marshmallow mangwanani
Eustoma (Lisianthus, Japanese akamuka) - 1 bv.
Peony yakasimuka - 1 pc.
Mumwe-musoro akamuka - 3 bv.
Chimiro cheMimic, chakanakira madzimambo madiki madiki uye makuru)))
3600 ₽ Bouquet nhamba 248
Orchid Eustoma Alice Rose single-musoro Alstroemeria Eucalyptus
4400 ₽ Bouquet nhamba 305
Bush akasimuka - 21 pc.
Isu tinovimbisa kutsva kwemaruva .. kuburitswa kubva kumaawa maviri ... diki tsvuku maruva maruva mune yakashongedzwa uye chena bhokisi, yakashongedzwa neyakaomeswa satin uta, tarisa yakanatswa, yakashongedzwa uye yakashongedzwa. gadzira yekutanga uye inoshanda kurumbidza kune wako waunoda uye anodikanwa munhu!
4559 ₽ "Satin Chishamiso"
Mumwe-musoro akamuka - 101 bv.
Usavanze manzwiro ako, tiudze nezvavo nemaruva epinki maruva! The bouquet kunoshamisa runako uye unyoro netsika dzinomiririra uduku, runako, panobuda itsva manzwiro. Maruva epingi zvakare kuratidzwa kwekunzwira tsitsi uye zano risinganzwisisike rekufarira kwemusikana. Iyo yakakomberedza ngowani bhokisi iro maruva akaiswa mukati mairi rinopa iro razvino razvino, ratidziro uye razvino kutaridzika. Chipo chakadai chinonyatso kukosheswa!
17680 ₽ Pink zviroto
Iyo bouketi yemakumi mana neshanu yezuva yero tulips mune ngowani bhokisi ndicho chakanyanya chitubu uye chakapusa chipo chaunogona kufunga nezvazvo. Makuru mahombekombe ehumambo tulips anoshamisika nekushongedzwa kwemumvuri uye zvinyoro shanduko yetoni pane iwo maruva, ese pamwe chete achigadzira rwiyo rumwe rwekudziya, rudo uye hunyoro.
5848 ₽ Kwayedza mangwanani.
Ratidza maruva ese mumabhokisi
Tswanda yemakumi maviri nemashanu-mavara eKenya maruva ane ekushongedza greenery mune yechipo tswanda.
4750 ₽ Tswanda yemaruva (25 maroses)
Tswanda yemakumi maviri nemashanu-mavara freesias ane ekushongedza greenery mudengu.
7300 ₽ Tswanda yemaruva "Multicolored freesia mutswanda"
Tswanda gumi nemashanu-mavara alstroemerias ane ekushongedza greenery.
5000 ₽ Tswanda yemavara alstroemeria (19 pcs)
iris 7, lisianthus 3, bush rose 2, tulip 10, statice 1, greenery, tswanda
6800 ₽ Tswanda yemaruva emvura "Chitubu chakajeka"
Basket mune yakajeka mavara e roses 19 pcs, alstroemeria 10 pcs, germini 18 pcs, pfapfaidza roses 5 pcs, irises 13 pcs, solidagi 10 pcs. ine yekushongedza greenery mune yechipo tswanda.
14850 ₽ Basket nemaruva "Valley of the Sun"
Tswanda yemakumi maviri nemaviri-mavara tulips ane ekushongedza greenery.
4850 ₽ Bhasiketi yemhando dzakasiyana-siyana tulips "Chitubu Kaleidoscope"
Tswanda ye18 yakawanda-mavara tulips uye 17 yebhuruu irises neyekushongedza greenery.
5650 ₽ Basket ine tulips uye irises "Hafu yeawa nguva yechirimo"
Tswanda mumatoni epinki e5 Aqua roses, 4 spray roses, salal, pistachio.
3050 ₽ Bhasiketi nemaruva "Kurumbidzwa kudiki"
Ratidza mabhasikiti ese emaruva
Zvibereko zvemabhasikiti uye zvinyorwa
Kuumbwa mubhokisi-moyo wemashirobheri matsva 700 gr uye chando-chena gypsophila 3 pcs.
4950 ₽ Kuumbwa mubhokisi rine maruva nemabriji "Strawberry penya"
Basket nemabriji: sitirobheri 500 gr, macheribheri 125 gr., Raspberries 125 gr, bhurubheri 125 gr, currants 125 gr, macarons 14 pcs.
8150 ₽ Basket "Maorivhi ane macaroons"
chinanaini 1, red apple 2, green apple 2, yero apple 2, ndimu 1, orenji 3, tangerine 3, kiwi 2, mabhanana 5, peya 2, green mazambiringa 1, mazambiringa matema 1
5750 ₽ Chibereko tswanda "Chibereko chitsva"
Strawberries (Strawberries) - 32 bv.
Chipo chisina kujairika kubva ku Strawberries chakanakira musikana wako. Amai naambuya vachada sumbu remabriji anonaka, sechiratidzo chekuyananisa nekuda kwekusavapo kwenguva refu !!!
4620 ₽ Strawberries nemaruva.
Bhokisi rakagadzirwa nemoyo rakagadzirwa nemabriji: sitirobheri 500 gr., Raspberries 125 gr., Mablackberries 125 gr., Blueberries 125 gr., Currants 125 gr.
7450 ₽ Mwoyo bhokisi "Berry musanganiswa"
Chibereko tswanda: Thai watermelon 1, royal pomelo 1, chena pitahaya 1, yero pitahaya 2, lime kaffir 1, mudiki cocktail coconut 1, 4 dzakasiyana mango mhando, carambola 4, mini pineapple 1, guava 1, longan 1, passion fruit 3 , kiwi premium goridhe 3, mangosteen 4, papaya 1, rambutan 10, grandilla 3, coconut yakajairwa 1, physalis pack 1, - pamwe neexotic Vanda 3 orchids, cymbidium orchid 4, dendrobium orchid 13.
39750 ₽ Tswanda yemichero yekumwe michero uye orchids "Paradise Phuket"
Strawberry 1250 gr., Blueberry 500 gr., Blackberry 500 gr., Currant 250 gr., Raspberry 375 gr., Peony 6 pcs., Chamomile 9 pcs., Pistachio, ribhoni, tswanda.
19750 ₽ Basket ine ma berries uye maruva "Nemwoyo wangu wese!"
avocado 7, kiwi 2, rose 7, chrysanthemum 3, lagurus 1 bunch, cherry madomasi 15, eucalyptus 1 pack, pistachio 3, bhokisi 1
8250 ₽ Zvinoumba "Avocado"
Ratidza zvese michero mabhasiketi uye nziyo
Sweets uye confectionery
Basket mune bhuruu-kirimu toni dzeruva, yepepuru freesias, lisianthus, chena alstroemeria, pamwe netii mugaba, mabhisikiti anogona, Lindt chokoreti, mudengu.
9350 ₽ Tswanda nemaruva, tii uye zvihwitsi "Matre"
Коробка в ярких тонах из роз 61 шт, клубники 1000 гр., малины 250 гр., голубики 250 гр., смородины 250 гр., ежевики 250 гр.
28250 ₽ Подарочная коробка "Сангрия"
Подарочный набор с фарфоровыми чайником и чашкой, шоколадом и лавандой
4690 ₽ Bouquet nhamba 323
4950 ₽ Bouquet nhamba 324
Muchero wemichero yakaomeswa.
4350 ₽ Bouquet nhamba 4
Maruva evarume anonaka.
4050 ₽ Bouquet nhamba 6
Ratidza zvihwitsi zvese nemabheka
Букет из 19 белых роз в коробке Кения
6050 ₽ Букет из 19 белых роз в коробке
Bouquet ye spray chrysanthemums (yero, chena uye pingi) 9 pcs ine yekushongedza greenery mune yechipo bhokisi.
3050 ₽ Chrysanthemum bouquet "Sunny Kyoto"
5400 ₽ Bouquet nhamba 283
Букет с подсолнухом и белыми цветами
2750 ₽ Bouquet nhamba 293
Букет из 15 розовых тюльпанов в коробке.
5500 ₽ Букет из 15 тюльпанов в коробке
Mumwe-musoro akamuka - 29 bv.
Usavanze manzwiro ako, tiudze nezvavo nemaruva epinki maruva! The bouquet kunoshamisa runako uye unyoro netsika hunomirira uduku, runako, panobuda itsva manzwiro. Maruva epingi zvakare kuratidzwa kwekunzwira tsitsi uye zano risinganzwisisike rekufarira kwemusikana.
4736 ₽ Розовые счастье.
14849 ₽ Sara 15
15 малиновых пионов в дизайнерской упаковке
3800 ₽ 15 малиновых пионов в дизайнерской упаковке
Tarisa ma bouquets ese nemitengo yakaderera